အရင်အတိုင်း အာဆင်နယ်လား? ဘီဘာနီယန်ရှုံးပွဲမှာ ယခင်အတိုင်း မပြောင်းမလဲရှိနေဆဲ အာတီတာရဲ့အာဆင်နယ် – Play Maker Sports Journal
အရင်အတိုင်း အာဆင်နယ်လား? ဘီဘာနီယန်ရှုံးပွဲမှာ ယခင်အတိုင်း မပြောင်းမလဲရှိနေဆဲ အာတီတာရဲ့အာဆင်နယ်
အခွင့်အရေးမသုံးမချနိုင်မှု၊ခံစစ်အမှားများပြုလုပ်မှုတွေနဲ့အတူ အာဆင်နယ်နဲ့ လမ်းဟောင်းကြီးအတိုင်း ဆက်လက်လျှောက်လို့ကောင်းတုန်းဖြစ်ပါတယ်။
ဟီဘာနီယန်အတွက်ဂိုးများကိုပွဲချိန်၂၁မိနစ်မှာမာတင်ဘွိုင်လီနှင့်ပွဲချိန်၆၉မိနစ်မှာမက်ကေးတို့ကသွင်းယူခဲ့ပါတယ်။အာဆင်နယ်အတွက်ချေပဂိုးကို၈၂မိနစ်မှာအီမီလီစမစ်ရိုးကဟက်တာဘယ်လီရန်ရဲ့ဖြတ်တင်ဘောကနေ Volley ရိုက်ပြီးကန်သွင်းခဲ့ပါတယ်။ဟီဘာနီယန်ရဲ့အဖွင့်ဂိုးကအာဆင်နယ်အတွက်ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်ပွဲထွက်ကစားခွင့်ရခဲ့တဲ့ဂိုးသမားအိုကွန်ဝိုကရှေ့ထွက်ပြီးဘောလုံးရှင်းထုတ်ရာမှာကန်ချက်လွဲပြီးဘွိုင်လီကရရှိကာအပိုင်ကန်သွင်းပြီးရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အရင္အတိုင္း အာဆင္နယ္လား? ဘီဘာနီယန္ရႈံးပြဲမွာ ယခင္အတိုင္း မေျပာင္းမလဲရွိေနဆဲ အာတီတာရဲ႕အာဆင္နယ္
အခြင့္အေရးမသုံးမခ်ႏိုင္မႈ၊ခံစစ္အမွားမ်ားျပဳလုပ္မႈေတြနဲ႔အတူ အာဆင္နယ္နဲ႔ လမ္းေဟာင္းႀကီးအတိုင္း ဆက္လက္ေလွ်ာက္လို႔ေကာင္းတုန္းျဖစ္ပါတယ္။
ဟီဘာနီယန္အတြက္ဂိုးမ်ားကိုပြဲခ်ိန္၂၁မိနစ္မွာမာတင္ဘြိဳင္လီႏွင့္ပြဲခ်ိန္၆၉မိနစ္မွာမက္ေကးတို႔ကသြင္းယူခဲ့ပါတယ္။အာဆင္နယ္အတြက္ေခ်ပဂိုးကို၈၂မိနစ္မွာအီမီလီစမစ္႐ိုးကဟက္တာဘယ္လီရန္ရဲ႕ျဖတ္တင္ေဘာကေန Volley ႐ိုက္ၿပီးကန္သြင္းခဲ့ပါတယ္။ဟီဘာနီယန္ရဲ႕အဖြင့္ဂိုးကအာဆင္နယ္အတြက္ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ပြဲထြက္ကစားခြင့္ရခဲ့တဲ့ဂိုးသမားအိုကြန္ဝိုကေရွ႕ထြက္ၿပီးေဘာလုံးရွင္းထုတ္ရာမွာကန္ခ်က္လြဲၿပီးဘြိဳင္လီကရရွိကာအပိုင္ကန္သြင္းၿပီးရခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
ယူရို ၂၀၂၀ အကောင်းဆုံးအသင်းတွင် အင်္ဂလန်ကစားသမားသုံးဦး ပါဝင်ပေမယ့် ၃ ကြိမ်ဖန်တီးခဲ့တဲ့ လုခ်ရှောမပါဝင်
ဆာကာ အဆုံးအဖြတ်ပင်နယ်တီ မဝင်အောင် ကျိန်စာတိုက်ခဲ့ကြောင်း ချီရယ်လီနီဖွင့်ချလာ